Kitra – «Cosafa cup 2018» : resin’ny Chipolopolo ny Barea | NewsMada
Kitra – «Cosafa cup 2018» : resin’ny Chipolopolo ny Barea
Nifarana, teo amin’ny manasa-dalana, ny dian’ny Barea de Madagascar, ho an’ny fiadiana ny «Cosafa cup 2018», taranja baolina kitra. Fihaonana, notanterahina, omaly alarobia tao amin’ny kianja Peter Mokaba Stadium. Nosakanan’ny Chipolopolo, avy any Zambia, ny lalan’ny Barea ary noravan’izy ireo ny nofinofy hiatrehana ny famaranana.
Resin’ny Zambianina, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny ekipam-pirenena malagasy. Baolina tokana nampidirin’i Kambole, teo amin’ny minitra faha-39. Tsy fitandreman’ny vodilaharana Malagasy tamin’ny fakana ny mpifanandrina aminy no nohararaotin’ny Zambianina nandefa an’i Kambole, nanana fotoana tsara nandakana ny baolina tany anaty tsatoby malagasy. Raha ny fizotrany ny lalao, nifandanja na nanantombo teo amin’ny fanafihana aza ry zareo Zambianina.
Anisan’ny tombony ho an’ny Zambianina ny teo afovoan’ny kianja. Nanjakan-dry zareo tanteraka mantsy izany ary nahafahany nandamina tsara ny lalaony. Saika niainga tamin’ny sisiny havian’ny kianja hatrany ny baolina nataon’izy ireo.
Nanova paikady i Francklin, mpanazatra, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa.
Nampiana ny irakiraka
Nohatevenina ny teo afovoan’ny kianja izay niarahan’i Dax sy i Mika. Voakorontana tanteraka ny Zambianina, tamin’izany. Tonga aloha hatrany ny vodilaharana malagasy notarihin’i Johnny sy i Ando ary i Toby, raha vao misy baolina niadiana ka tsy tafavoaka mihitsy ny Zambianina.
Nanomboka teo amin’ny minitra faha-70, tsy nanao fanafihana firy intsony ny Zambianina fa efa nanamafy ny fiarovantena. Nateti-piavy rahateo ny valim-panafihana nataon’ny Barea, saingy ratsy ny famaranana. Matetika, tratry ny fikoropahana ireo lohalaharana malagasy ka votsotra hatrany ny baolina, rehefa tonga ao anaty faritra tsy azo ivalozana.
Na izany aza, anisan’ny nisongadina i Leda, mpiandry tsatoby malagasy, teo amin’ny fanakanana ny dakan’ireo Z²ambianina na teo amin’ny fizaram-potoana voalohany na ho an’ny fizaram-potoana faharoa.
Nilalao 10 ny Barea de Madagascar, teo amin’ny minitra faha-88, rehefa nahazo karatra fanindroany i Rojo.
Tsy mbola afa-bela tamin’ny Zambianina izany ny Barea de Madagascar, teo amin’ity fiadiana ny “Cosafa cup”, ity. Hiady ny medaly alimo izany sisa ny Malagasy.